Enye yezinto ezibalulekile kunazo endlini kuyinto puncher. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulabo zokuhlala, lapho izindonga eyakhiwe ngezitini nokhonkolo. Uqedile usebenzisa izimbobo sokuprakthiza ezivamile kuyoba nzima kula izinto, ngisho noma insimbi ifakwe indlela esiphawuleka. Kodwa ahlukanisa ingxenye ehlukile odongeni ngaphandle isibhamu ayiphumelelanga. Yingakho umthengi yesimanje uya Okubukwe isilinganiso izando namuhla, kusukela lapho ungafunda, lokho imodeli futhi yini kangcono makudle izici.
Usezingeni izici eziyinhloko: umfutho
Ukhulume e isici isihlokwana ubizwa nangokuthi nomthelela namandla futhi ulinganiswa Joules. Kungaleso wakhe kuzoncika onjani ukujula usebenzisa isibhamu, ungakwazi shí impahla. Uma kuziwa ukukhanya amathuluzi yasendlini, bese lesi silinganiso kuzohluka phakathi 1 neyesi-2 Johane. Khumbula ukuthi umthelela amandla ezincane ngeke sivumele ngezibhakela izimbobo kahle. Lokhu kungenxa yokuthi Punch kuleli cala ezosebenza ngesisekelo sokuprakthiza umthelela.
Imodeli ephelele isiteleka amandla
Uma unquma ukuthenga ithuluzi ngamandla amakhulu kangangokuthi umthelela, kunengqondo ukuba ucabangele isibonelo Kölner KRH, okuyinto ongasebenza ngayo kwelinye izindlela ezintathu, ukuhlinzeka umthelela zamandla 2.2 J .. Ukusebenza leli thuluzi kungenzeka lapho imishini nge nomthelela imishini noma ukusebenza chiseling. Linikeza imishini futhi khona emikhonweni zokuzivikela, okuyothi ukujikeleza kudivayisi luqedwe ezandleni ngesikhathi wenza umcimbi imishini. Non-ngokusebenzisa izimbobo, ubukhulu ngqo kungenziwa yamba ngokusebenzisa stop ukujula.
Uma ucabangela isilinganiso perforator ukusetshenziswa ekhaya, ungakwazi unake mthandazo oyisibonelo, ngoba kunezinzuzo eziningi, kuhlanganise nekhono ngokushesha ukushintsha ngenxa zokuboshelwa chuck SDS-plus. Umenzi anakekela khona reverse, turning kancane nasizayo isibambo, ngawo opharetha ongama ithuluzi. Njengoba izinzuzo ezengeziwe kufanele kube nokwenzeka ukuba ulungise isivinini kanye ukuba khona obusebenzayo "Qala" ukuvala ukhiye, it kuyokwenza operation okuqhubekayo.
Kukhethwa kwalesi simiso sokuprakthiza ukukhweza imodeli
Vakashela esitolo futhi ukufunda izilinganiso, uzobona ukuthi i-uxhumano umenzi sokuprakthiza ungahlinzekela omunye izinhlelo ezikhona. Lesi sici sizothinta ukuziphatha umshini ngesikhathi ukusetshenziswa Inkomba nokwethenjelwa. Ngakho, uhlelo SDS-plus, okuyinto etholakala imodeli ngenhla echazwe isetshenziswa perforators encane kabani isisindo ingeqi 4 kg. idivayisi okunjalo unamandla okunipha izimbobo ngenhloso ububanzi ku ezahlukene 3 cm.
Lolu hlobo idivayisi kuyinto compact, ngakho uwasebenzise ekuphileni kwansuku zonke Kuyinto elula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kulolu hlobo yasibamba ka sokuprakthiza, ungakwazi ukuthenga tooling ezengeziwe. On ukudayiswa ungathola amathuluzi ukuze ngesankahlu uhlelo ezingavamile - SDS-max, okuyinto musa njalo nethuba ukuhlangabezana ezitolo ezincane.
Drifters Isilinganiselwa ikuvumela ukuba ukhethe imodeli ezokwenza ezikufanelayo kuzo zonke izici. Ngakho, amandla iyisici eliyisisekelo lokuthi bathonywa abathengi. Ngisho kakhulu eliphezulu ithuluzi indlu sinesikhundla aphansi kunanoma iyiphi enye sokuprakthiza. Lapho isibhakela izimbobo hlobo luni lwamandla buzoba buncane kakhulu kunangesikhathi Drilling phandle. Boer akanayo spin okushesha njengokungena esimweni sokuprakthiza nge sokuprakthiza. Ukuze kuzuzwe high speed ujikeleza kudinga semali amandla. Uma ngaphambi kokuba wokhele sokuzivivinya, umthamo zazo zokhahlamba kusuka Watts 400 kuya ku-800, angasetshenziswa ukuze kulungiswe ekhaya. By the way, lawa athandwa kakhulu.
Imodeli amandla ephelele
Njengoba isibonelo imishini enjalo angase acabangele umfuziselo Kölner KRH 520 H, amandla okuyinto 520 Watts. Powered imishini kusukela amapayipi voltage ka 220 V, futhi nenombolo ongafinyelela 1000 linemibhikisho ngomzuzu. I-opharetha uzokwazi ukusebenzisa isivinini eyodwa kuphela futhi umthelela force 1.5 J.
Umenzi uye walungiselela khona ngemuva, futhi inani imivimbo ongafinyelela 3900 ngomzuzu. Uma ucabangela isilinganiso izando ekhaya, ungakwazi unake emandleni hhayi kuphela, kodwa futhi nezinye izici ezifana ikhono ithuluzi ngezibhakela ngezinto ezahlukene. Endabeni le imodeli, ububanzi esiphezulu emigodini metal, bokhuni nabetshe ukuba 13, 30 no-20 mm, ngokulandelana. Ithuluzi ukala kg 2.7 kuphela, okufakiwe bamba ukuphepha, okuyinto kusiza umsebenzi.
Isilinganiselwa Inani ukusebenza izindlela
Usezingeni we punchers engcono kusikisela ukuba khona amamodeli emithathu nje izindlela wokusebenza. Nokho, emakethe ungathola amathuluzi nge esisodwa noma ezimbili izindlela. Endabeni yokugcina a unit ukuthi akufane ukusebenza bayamba. Ingasetshenziselwa ukuze bayamba metal noma ngaphezulu lokhuni. Uyayibumba ngezando nge izindlela ezimbili bayakwazi ukwenza izinhlobo ezengeziwe umsebenzi. Bangakwazi yamba, kanye ukuxhuma ne ukunyakaza Axial ka sokuprakthiza.
Uma phambi kwakho ithuluzi nge izindlela ezintathu, ungaqiniseka ukuthi unakho zonke izici izinhlobo ngenhla umsebenzi. Ngalo, ungenza amabhithi, ngaphandle tooling ngokushintshana. Kule modi lwesithathu wenziwa pin okumsulwa.
imodeli Isibonelo nge izindlela ezimbili
Ngokwesibonelo, imodeli KRATON RHE-550-22 izindlela ezimbili kuphela. Amandla lokhu imishini 550 W, futhi inombolo linemibhikisho ngomzuzu ongafinyelela 850. Ukusebenzisa leli thuluzi kungaba ijubane eyodwa kuphela, lapho amandla umthelela kwaba 1.8 J. Leli thuluzi ukala 2.3 kg. Ukusetshenziswa ekhaya mass unikezwa kahle. Kuyaphawuleka ukuthi okokusebenza enikeziwe ecaleni ekuthwaleni, kulungile kulabo abasebenzisi abavame bayasebenza.
Abakhiqizi izando, isilinganiso ongayithola esihlokweni, ukunikela ukudayiswa onobuhle ahlukahlukene ukuthi uhlangabezane nezimfuneko ezithile. Ngo esitolo ungathola amamodeli zihlukaniswa ngemibala. Hue izobonisa insimbi utfolakala kuluhlobo yasekhaya noma professional.
Abathengi abaningi zama ukukhetha enokwethenjelwa kakhulu isando rotary, izilinganiso ukubasiza kule. Kusukela ke ungakwazi ukuthola ukuthi yini brand ethandwa kakhulu namuhla:
Uma unesithakazelo sokuzivivinya Makita, ngalesosikhathi you azi ukuthi kukhona elula, okuthembekile nokulula. Uma ufuna ukufeza ukulungiswa ezincane ehhovisi noma ekhaya, la mathuluzi bazokwazi ukufeza kahle imisebenzi yabo. Umenzi ngokuvamile inikeza imishini reverse isango, kanye switch Imodi isikhethi, esemgwaqweni at the ezingemuva. Ethandwa kakhulu imodeli umthengi kanye Makita HR2450 Makita HR2470. Ukukhetha omunye wabo, ungasebenzisa amandla esingeqile 700 W, kanye nomthelela sisebenza kuleli 3 J. Ngokuqondene ijubane injini ke umzuzu owodwa ithuluzi azokwazi ukukhiqiza amayunithi 4,500.
Izici Bosch izando rotary
uyayibumba ngezando eziphezulu ekhaya isilinganiso okuyinto okusesihlokweni esithi, uphiwa ukudayiswa ngumkhiqizi ka Bosch eJalimane. Lezi amayunithi zenziwa ngokuvumelana ubuchwepheshe yesimanje kakhulu futhi libhekene izinga okusezingeni eliphezulu, enokwethenjelwa futhi ihlala isikhathi eside. Baqonda kahle kwabangela electronics kanye namathuluzi e umkhuba akuvamile behluleka.
Ngosizo esihambelanayo opharetha obusebenzayo bazokwazi ngokushesha afeze ukulungiswa esihle inani ijubane ukujikeleza sokuprakthiza. Uma ubona Bosch izando rotary esitolo, khona-ke akufanele ukhethe eyodwa uba nombala oluhlaza okwesibhakabhaka, njengoba zenzelwe ukusetshenziswa emsebenzini. Ezezindlu imodeli efanelekayo, ababethi oluhlaza. Khuluma ngalokho kungcono ukukhetha okukhethwa kukho, ke akudingekile, kusukela bonke babo babe izinga ubulungiswa.
Russian Isilinganiselwa Drifters
punches isiRashiya, isilinganiso okungase zikuvumela ukuba nenze izinqumo ezifanele ahlinzekwa namuhla ngemali engambi eqolo. Ngokwesibonelo, ungathola umfuziselo "Interskol P-45/1000 Oe," okuyinto kuyodingeka bakhokhe ruble 23.000. Lokhu imishini usebenza izindlela ezimbili, okuyilezi, njengoba isando kanye Punch. Enye nomkhiqizi engengaphansi owaziwa Russia kuyinto "Movement". Uma unesithakazelo imikhiqizo wale nkampani, ungakhetha imodeli ES-800/26, okuyinto efanelekayo ukusetshenziswa ekhaya futhi ngempela ezishibhile. Ukuze ukhokhele lizoba ruble 4000 kuphela. Kodwa lokhu kusebenza akusebenzi phansi kunabaphostoli imishini onobuhle ezibizayo, ngoba opharetha Ungayisebenzisa usebenze ngesivinini ezintathu, esebenzisa umthelela amandla esiphezulu 3.2 J. Amandla ukusetshenziswa idivayisi 800 Watts.
Uma unesithakazelo sohlelo izando yasendlini, ungakwazi ukuziqhakambisa nomakhi Russian - "Energomash", enikeza ukudayiswa ezihlukahlukene imifanekiso. Phakathi kwabo uzothola PE-25500, okuyinto kuyodingeka bakhokhe ruble 2900. Amandla ukusetshenziswa Watts 500, esiphezulu umthelela zamandla 3.4 J .. Nalokhu imishini, ungasebenza ngendlela ukufakwa kokumqoka kuphela noma imodi sokuprakthiza. Phakathi ukusebenza eyengeziwe kufanele ezigqanyisiwe: inkinobho Lock, ukuhlanekezela, isibambo elisizayo, ukujula geji.
Isilinganiselwa Drifters kuzokuvumela hhayi kuphela ukwenza isinqumo esihle, kodwa futhi ukucacisa izici elilungile. Phakathi kwabo, kufanele zabelwe amandla Yiqiniso, eshintsha ku uhla kusuka Watts 500 kuya ku-800. Ukuze imishini enjalo amandla umthelela akumele leqe 2.2 J, kodwa akufanele iwe ngezansi 1.2 J. Ochwepheshe batusa amathuluzi ngokukhetha, esingaphansi 3 yokusebenza izindlela. Ngempela, ngemva ukulungisa, uzodinga hhayi kuphela umjikelezo okulula umbuso, kodwa futhi ukujikeleza, okuyinto kungase kuhambisane zishayo. Ngezinye izikhathi kunesidingo ukusizakala imodi umthelela, okungasekelwe ephelezelwa ngokushintshana. Uyayibumba ngezando, isilinganiso nokulondeka obekulokhu kungekho ethulwa ngenhla, kufanele kukhethwe futhi ukuba khona a se zokuzivikela, okuyinto Uyoqeda kungenzeka wenza umcimbi sokuprakthiza.
Izikulufu zokhuni: lula, ukuthembeka, ukuqina
Antidepressant 'Azafen', yokusetshenziswa, imiphumela emibi
Ihlangano yokuNgeza Surgery. Vishnevsky: umlando, incazelo